Emailka Qormooyinka Zombie. Xaqiiqda aan la Aqbali Karin - Jawaab Ku Saabsan
Halkan, Lisa Mitchell, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiil, ayaa ka hadlay sida loo tirtiro xajmiga ama spam kadib markaad heshay email. Waxay sidoo kale ka hadashaa sida loo nadiifiyo nidaamka kombiyuutarada cudurka qaba. Dhanka kale, waa in aad maskaxda ku haysaa in ZombieAlert loo qaabeyn karo ama loo bedeli karo si ay kuu soo diraan farriimo isku mid ah sida lagu muujiyey SophosLabs.
Aqoonsiga cinwaanada IP ee kombuyutarada Zombie
Tallaabada ugu horreysa waa in la ogaado cinwaanada IP-ga kombuyuutarrada zombie si aad si fudud ugu xannibto. Markaad heshay emayl digniin ah, waa inaad u fiirsataa shabakada ama cinwaanka IP ee emailkan ka yimid - peru travel planner. Waa lagama maarmaan in la xakameeyo cinwaanka IP sida ugu dhaqsaha badan, oo waa inaad eegtaa bakhaarada, qalabka muhiimka ah iyo qalabka shabakadda ee khatarta suurtagalka ah. Kadibna, waxaad ku ogaan kartaa cinwaanka dibadda cinwaanka gudaha ee nidaamkaaga. Haddii cinwaanka IP-ga ee asaasiga ah uu abuurayo khasaare, waa lagama maarmaan inaad xakameyso, waana inaad dib u eegtaa qalabka shabakada ka hor intaadan hawshaan qabsan.
Marka aad si guul leh u aqoonsatay cinwaanka IP-ga, tallaabada xigta waa inaad isticmaasho ilahaaga si aad u ogaato kombiyuutarka iyo goobta. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu heli karo kombiyuutarku waa in la isticmaalo qoraallada isbeddelka shabakadda. Ku dhowaad dhammaan ururrada waaweyn waxay isticmaalaan habab kala duwan si ay u aqoonsadaan meesha nidaamyadooda kombiyuutarka loo soo bandhigo iyo sida nidaamyada loo isticmaalo hawlo kala duwan.
Nadiifinta kombiyuutarada ay saameeyeen
Marka aad ogaato cinwaanka IP-da iyo goobta kombuyuutarka, talaabada xigta waa in la nadiifiyo qalabka kombiyuutarka ee saameeya..Tani, waxaad ku rakibi kartaa software Sophos Antivirus iyo qalabka si fiican u sawir. Haddii aad si guul leh u rakibtay SAV oo waa version cusub, waa inaad ka joojisaa kumbuyuutarkaaga interneetka oo aad ka buuxiso baaritaanka buuxa. U ogolow daqiiqado yar ka hor inta aanad bilaabin iyo isku xirnaanta internetka.
Waa muhiim in la ogaado inaad ka bixi lahayd kombiyuutarka dhammaan shabakadaha oo ka tag foomka illaa aad ka sameysey qalabka. Nadiifi dhammaan hanjabaadaha iyo buuxinta talaabada afaraad iyo shanaad ka hor intaan la xiriirin internetka.
La soco kombiyuutarrada kaddib marka la nadiifiyo
Waa muhiim inaad dib u soo celiso faylashaada oo aad ka saarto faylasha aan loo baahnayn si nadiif ah. Haddii nidaamka kombiyuutarkaagu uu xiran yahay, waxaad si taxadar leh u kormeeri kartaa oo u beddeli kartaa goobaha. Foom kasta oo keenaya dhibaatada waa in la tiriyaa ama la tirtiraa isla markiiba.
Hubi nidaamka ka hor intaanad isku xirin internetka
Haddii aad ku rakibtay barnaamijka antivirus ee Sophos, waxay baari doontaa qalabkaaga khatarta suurtagalka ah ee fayrasyada iyo nadaafada. Barnaamijka waa in si joogto ah loo cusbooneysiiyaa si aad uga heshid dhamaan faa'iidooyinka. Haddii SAV aan la rakibin, waa inaad ka soo qaadataa bogga la isku halleyn karo oo u rakib sida ugu dhakhsaha badan.
Hubi in kombiyuutarka kombiyuutarka iyo faylasha kale ay yihiin kuwo la socda iyo sida ay u dhigan yihiin heerarka Windows Ammaanka Nidaamka Badbaadada. Haddii kale, waxaad ka akhrisan kartaa qoraalada by Analyzer Basel si ay u leeyihiin fikrad ah sida loo tirtiro zombies ee kombiyuutarka.
La socoshada waxqabadyo xun
Marka aad internetka ku xiran tahay ka dib baaritaan ku habboon, waa inaad ilaalisaa qalabka si aad uhesho waxqabadyo xun. Hubi xidhiidhada shabakada iyo faylasha oo dhan si taxadar leh. Haddii aad la kulantid dhibaatooyin, waa inaad la xiriirtaa kooxda taageerada farsamada ee Sophos oo raac fariintooda si taxadar leh.